Wasaaradda Qorsheynta oo tallaabo hor leh u qaadeysa uruurinta xogaha Qaranka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Qorsheynta oo tallaabo hor leh u qaadeysa uruurinta xogaha Qaranka.
Wasaaradda Qorsheynta oo tallaabo hor leh u qaadeysa uruurinta xogaha Qaranka.
Wasaaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa bilowdey ballaarinta Xogaha Qaranka.
Maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta xogaha Qaranka Qaaradda Africa, munaasabaddii lagu xusayey waxaa ka qeyb-galay wasiirro, iyo saraakiil ka socotay hey’adaha kale ee dowladda.
Hal ku dhigga maalintaan ayaa loo bixiyey Nolol wanaagsan iyo xog dhaqaale oo horumarsan, wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya waxa ay hiigsaneysaa hal ku dhiggaasi.
Agaasimaha guud Xogaha Qaranka ee Wasaaradda Qorsheynta C/raxmaan Cumar Daahir, ayaa sheegay in xog uruurintu ay u tahay muhiimadda ugu weyn, sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ay si dhow ula socdaan isbaddellada maciishadda suuqyada dalka, bil walbana ay warbixin ka soo saari doonaan.
Wasiir ku xigeenka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Khaloocoow ayaa yiri “dowladdu waa in ay fahamtaa qorsho la’aan in aanan horumar la gaari karin, sidaa darteedna ay waajib tahay in la horumariyo wasaaradda Qorsheynta qeybaheeda oo dhan.
Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo horumarinta Dhaqaalaha Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in sannadka 2018-ka u diyaar garoobbeen horumarinta Dhaqaalaha, Xogaha Qaranka ay ka mid tahay tirakoobka dadweynaha oo doorashooyinka muhiimad gaar ah u leh iyo hirgelinta mashaariic hor leh.
Previous articleQalabkii maamulka Hawada Soomaaliya oo la rakibay
Next articleGuddoomiye Thaabit oo Dawooyin gaarsiiyey Xabsiga dhexe ee Xamar